Wednesday September 04, 2019 - 20:33:03 in Wararka by Liibaan Jeexoow
maxkamad Maxalli ah ayaa soo saartay qaraar dhalashada muwaadinimmo looga xayuubinayo dad dhan 1.9 milyan oo qof muslimiin ah kuwaas oo hadda dhibanayaal ku ah xuduudda ay wadaagaan Bangaladeesh iyo Hindiya.
Mas'uuliyiinta gobolka Assam ee Hindiya ayaa sheegay in dadkan muslimiinta ah ay yihiin kuwa tarxiil sugayaal ah kadib markii ay maxkamadda sare diidday racfaan ay horay uqaateen boqolaal kun oo qof.
Qaanuun cusub ee Hindiya soo saartay ayaa muslimiinta gobolka Assam ka dhigaya ajaanib shisheeye ah oo aan xaq u laheyn in ay wadanka ku noolaadaan waxaana loo tarxiilayaa dhanka Bangaladheesh.
Amiit Shaah oo ah wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Hinduuska ayaa sheegay in ay fulinayaan ballanqaadkoodi ahaa eryidda wax uu ugu yeeray kuwa xuduudda kasoo xaluushay oo uu ula jeedo muslimiinta gobolka Assam.
hay'adaha sheegta in ay udoodaan xuquuqul insaanka ayaa sheegaya in falalkan ay soo maleegeen dadka Hinduuska ee caanka ku ah naceybka ay uqabaan islaamka iyo muslimiinta.
Tallaabadan dhalashada loogala laabtay malaayiinta qof muslimiinta ah ayaa kusoo aadaya xilli dowladda Hindiya ay laashay ismaamul hoosaadkii ka jiray gobolka Kashmiir ee gummeysiga ku jira waxaana gobolkaas lagu biiriyay dalweynaha Hindiya intiisa kale.